दुःख गर्नेका लागि हङकङ राम्रो - Tesro Ankha
दुःख गर्नेका लागि हङकङ राम्रो
10975 पटक पढिएको
तपाईंको आफ्नो बारेमा बताइदिनुस् न ?
मेरो नाम अस्मीता खापुङ हो । मेरो घर तेह्रथुम हो । म हङकङ आएको ८ वर्ष भयो । म अहिले हङकङको सेन्ट्रल भन्ने ठाउँमा पिज्जा एक्स्प्रेसमा काम गर्छु ।
हङकङ्मा अवसर कस्तो छ ?
अवसर राम्रै छ । जागीरका लागि खासै
समस् या छैन । तलब पनि राम्रै हुन्छ । यहाँ जति काम गर्न सकियो उति बचत गर्न सकिन्छ । दु:ख गर्नेका लागि हङकङ राम्रो छ ।
चुनौती कस्तो छ ?
यहाँको आइडी होल्डरलाई खासै समस्या छैन । भाषाको समस्याले राम्रो जागीर पाउन मुस्किल छ । आफ्नो योग्यताअनुसारको काम चैं पाइदैन । नेपालको सर्टिफिकेटले काम गर्दैन । प्रायस् दिनको बाह्र घण्टा खटिनुपर्छ । कोठा भाडा र जीवनशैली एकदमै महँगो छ ।
नेपाल सरकारबाट केही गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने छ कि ?
खासै छैन । नेपाली राजदूतावाससँग खासै सम्पर्क गर्नु पर्दैन । बन्द भएको नेपाली घरेलु कामदारका लागि सरकारले पहल गरिदिए हुन्थ्यो । घरेलु कामदारका लागि हङकङ सुरछित छ । धेरै दिदिबहिनीहरूले रोजगार पाउँथे ।
हामीले साधारण व्यक्तिको पनि अन्तर्वाता लिने गर्छौ | हामीलाई यो विश्वास छ कि सबैको आ-आफ्नै विशेष कथा र अनुभव हुन्छ | जुन आममानिसले सुने नयाँ लाग्ने र हौसला पाउने हुन्छ | अन्त्यमा तपाईंको त्यस्तो कुनै आफ्नो अनुभव छ भने सेयर गर्नुहोस्न ?
बिदेश आएपछि थाहा भयो काम ठूलो सानो हुँदैन भनेर । सबै नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि हामी बिदेशमा बाह्र तेह्र घण्टा खट्छौं, देश छाडेर आएपछि दिमाग कहिले पनि फ्रेस हुँदैन । राम्ररी सुत्न पाइँदैन ।
नेपालकै सम्झना आइरहन्छ । त्यसैले हामीले देशमा यहाँजस्तै खटिन सके राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ । मेरो पनि नेपाल गएर केही गर्ने सोच छ ।
बिदेश जान लाग्नु भएकाहरूलाई भन्दा पनि बिदेशमा रहनुहुनेलाई देश फर्किएर लगानि गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
प्रस्तुति : सुरेश यक्सो
२०७३ चैत्र ४ ०९:०३
यहाँसम्म पुग्न परिवारको साथ
‘उत्पीडितले निर्णायक विद्रोह गर्नुपर्छ’
‘नर्वेमा रहे पनि ढिँडो